प्रस्तुत बजेट यथास्थितिवादी र पूँजीवादी : मसाल - NepaliEkta
प्रस्तुत बजेट यथास्थितिवादी र पूँजीवादी : मसाल
572 जनाले पढ्नु भयो ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट ‘यथास्थितिवादी र पूँजीवाद’ प्रकारको भएको बताएको छ । सरकारले संविधानअनुसार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याएको बताएपनि त्यस अनुसारका कुनै कार्यक्रम नरहेको मसालले स्पष्ट पारेको छ ।
शनिबार वक्तव्य प्रकाशित गरी महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बजेटमा घुमाउरो पाराले एमसीसीका कार्यक्रम उल्लेख गर्नु संसदको अपमान भएको बताउनुभएको छ ।
तत्कालका लागि कोरोना भाइरसबाट पीडित जनताका लागि राहत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएपनि बजेटमा त्यसखालको कार्यक्रम उल्लेख नरहेको मसालले ठहर गरेको छ ।
‘यही जेष्ठ १५ गते संसदको संयुक्त अधिवेशनमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यबारे नेकपा (मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
६. अहिले कोभिड–१९ ले मुख्य गरेर दुईवटा गम्भीर समस्याहरू अगाडि ल्याएको छ : प्रथम, राष्ट्रिय आयमा ठूलो कमी, द्वितीय, बेरोजगारीको गम्भीर समस्या । तात्कालिक रूपमा उक्त दुवै समस्याहरूको समाधान कृषिमा नै खोज्नुपर्दछ । कृषि उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय आयमा बृद्धि गर्न सकिन्छ र ठूलो श्रम शक्तिलाई कृषिमा रोजगारी दिन सकिन्छ । तर कृषिमा नै सरकारले सन्तोषजनक प्रकारले बजेटको विनियोजन गर्न सकेको छैन ।
१९. बजेटको ठूलो अंश प्रशासनिक कार्यमा नै खर्च हुन्छ र एउटा सानो अंश मात्र विकास कार्यको लागि छुट्याइएको छ । राजस्वबाट हुने सम्पूर्ण आयबाट प्रशासनिक खर्च धान्न पनि मुश्किल पर्छ, त्यो अवस्थामा विकासको लागि आवश्यक रकमका लागि पूरै नै विदेशी सहायतामाथि निर्भर हुनेपर्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसरी देशको सम्पूर्ण विकास धरापमा छ भने पनि फरक पर्ने छैन । त्यसप्रकारको नीतिले देशलाई कति अगाडि बढाउने छ, सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । ’
← राजस्थानमा मूल प्रवाहद्वारा उद्वार कार्य जारी
प्रदेशका मन्त्रीहरुबाट बजेट बाँडफाँडमा समेत भेदभाव : सांसद जिसी →
भारतमा अलपत्र नेपालीहरुको आवाज संसदमा पनि गुंजियो (अडियो सहित)
8 May 2020 13 June 2021 Nepaliekta 0